Home » नायव सुब्बा » मानव विकास सूचकाङ्क / सुचाङ्क भनेको के हो ?
नायव सुब्बा द्धितीय पत्र
April 30, 2021 April 21, 2021 Debendra Subedi
निश्चित समयअवधिमा मानव विकासकाे सूचकहरूमा प्राप्त भएकाे अंकगणितिय चित्र नै मानव विकास सूचकाङ्क/सुचाङ्क हाे। यसले मानव विकासका विविध पक्षहरूकाे गुणस्तरियता, पर्याप्तता र उपर्युत्तताकाे विषयहरूलाइ समेटदछ।
मानवको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन आउनु मानव विकास हो । मानवको जीवनस्तरमा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, पूर्वाधार विकास आदिजस्ता पक्षले परिवर्तन ल्याउँछन् । यिनले मानवमा विकास भएको वा नभएको अवस्था पनि झल्काउँछन् । यी पक्षहरूको पर्याप्तता भएमा मानव विकास हुन्छ, नभए हुँदैन । मानवको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्ने उपरोक्त पक्षहरूलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कका अाधार
शिक्षा: शिक्षाले मानिसमा चेतना वृद्धि गर्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव बढाउँदछ । यसबाट मानव विकास हुन्छ ।
२. स्वास्थ्य: स्वास्थ्यले मानिसलाई दीर्घजीवी बनाउँदछ ।
३. रोजगारी: रोजगारीले आयआर्जन बढाउँदछ । मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।
४. पूर्वाधार विकास: सडक, सिँचाइ, सञ्चार, विद्युत् आदिको विकासले मानवजीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ । सुविधायुक्त काठमाडौँ र पिछडिएको जुम्लाको मानिसको जीवनस्तरमा फरकपन आउनु पनि यही भएर हो ।
यस्का अलावा मानव विकास सुचकाङ्क ले जनसांख्यिकीय लाभ, अवस्थित, गरिब र धनि विचकाे खाडल, सेवा छनाैटकाे उपर्युत्ता लगायत यावत विषयहरू समेटन थालेकाे छ।